merolagani - ट्रम्पपुत्र भारतमा जग्गाको कारोबार गर्दै, हेर्नुस् कहाँ कहाँ किन्दैछन् जग्गा !
ट्रम्पपुत्र भारतमा जग्गाको कारोबार गर्दै, हेर्नुस् कहाँ कहाँ किन्दैछन् जग्गा !
Feb 21, 2018 rss
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जेआर एक हप्ता लामो भ्रमणका लागि मंगलबार भारत आइपुगेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुन लागेको विश्व व्यापार सम्मेलनमा उनी सहभागी हुने भ्रमण तालिका रहेको छ । उनले भारतका अन्य सहरहरुको पनि भ्रमण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पुत्र ट्रम्पले भारतमा जग्गाको कारोबार सम्वन्धी दुई वटा परियोजना सुरु गर्ने भएका छन् ।
राजधानी नयाँदिल्लीसँगै रहेको गुरगाउँ र कोलकत्तामा त्यस्ता परियोजना सुरु गर्न लागेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले भारतका कोलकत्ता, मुम्बई, पुणे र गुरगाउँमा भारतीय लगानीकर्ताहरु र व्यापारिक अगुवाहरुसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।
“अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पपुत्रको यो व्यक्तिगत भ्रमण हो, त्यसैले भारत सरकारले पनि उनलाई त्यही अनुसारको व्यवहार गरेको छ,” एक अधिकारीले भने ।
ट्रम्प सहयोगी म्यागेजिनद्धारा अमेजनका मालिक बेजोसलाई ब्ल्याकमेलिङ्ग
टाटा मोटर्सको सेयरमूल्य एकैदिन ३० प्रतिशत घट्यो, ल्यान्डरोभर बिक्रीमा समस्या
गाउँमा बैंक पुगेसँगै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि,ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार
डाभोस विश्व आर्थिक मञ्च :नेता, व्यवसायी, अर्थविद् र अनुसन्धाताको कुम्भमेला
अमेरिकासँग चीनको ट्रेड सरप्लस १७ प्रतिशतले बढ्यो, १३ बर्षपछिकै उच्च स्तरमा पुग्यो
चीन र ताइवानका बीच फेरि बढ्यो तानातानी
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो एजिएम, साढे ४८ प्रतिशत लाभांश बाँड्न कहिले गर्दैछ बुकक्लोज ?
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स (NLIC) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बीमा कम्पनीमध्ये पहिलो साधारण सभा डाक्ने कम्पनी बनेको छ। इन्स्योरेन्सले आगामी जेठ ४ गते शनिबार होटल दियालो वीरगञ्जमा बिहान ९:३० बजे १९ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो।
असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन बीमा समितिको निर्देशन
सेञ्चुरी बैंकको लाभांश पारित, तीन सञ्चालन निर्विरोध
आरएमडीसी लघुवित्तको जगेडा कोषमा डेढ अर्ब, कति कमायो नाफा ?
आईपिओ अनुमति पाएको जनसेवी लघुवित्तको खुद नाफा २६०% बढ्यो
रणनीतिक साझेदार मुत्तूट फाइनान्स भित्र्याएको युनाईटेड फाईनान्सको यस्तोे छ प्रगति